बन्ला त पोखरादेखि मुस्ताङसम्म केबलकार ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ बन्ला त पोखरादेखि मुस्ताङसम्म केबलकार ?
बन्ला त पोखरादेखि मुस्ताङसम्म केबलकार ?
निजी जहाजसहित आएको अस्ट्रेलियन कम्पनी एएमएमले पोखरा-मुस्ताङ केबलकार निर्माणका लागि डीपीआर निर्माण सुरु गरेको छ । एएमएमले सुन्दै अपत्यारिलो लाग्ने पोखरा-मुस्ताङ करिब ८४ किलोमिटर लामो केबलकार परियोजनाको निजी जहाजबाट अध्ययन थालेको हो । कम्पनीले उतैबाट जहाज ल्याएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिमा उडाइरहेको छ ।
भौगोलितामा मात्रै नभएर खर्चको हिसाबमा पनि असम्भव जस्तै लाग्ने यो आयोजनाका लागि अहिले डीपीआर बनाउने काम भइरहेको छ । डीपीआर निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी एएमएमले अस्ट्रेलियन सेस्ना एफ ४०६ क्यारभान जहाजमार्फत गत सातादेखि आयोजना स्थलको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।
भदौ २९ गते लगानी बोर्डबाट आयोजना तयारीको अनुमति पाएको उक्त कम्पनीले १८ महिनाभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए), डीपीआर तथा लगानी व्यवस्थापन गरिसक्ने समयसीमा पाएको छ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएको छ । कम्पनीले अहिले जमिनमुनि र माथिको प्राविधिक अध्ययन तथा आयोजनाको फिजिबिलिटी अध्ययन गरिसकेको जनाएको छ ।
आयोजनाबारे अहिलेसम्म भएको अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ८४ किलोमिटर लामो केबलकार बन्नेछ । यो आयोजना सम्पन्न भए संसारकै लामो यात्रुबाहक केबलकार नेपालमा बन्नेछ । यसमा ७७६ वटा कार र ७७७ टावर हुने अनुमान गरिएको छ । केबलकारको भाडा नेपालीलाई ६ हजार, दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिकलाई ६ हजार भारु हुनेछ । त्यस्तै, विदेशीलाई २ सय अमेरिकी डलर हुनेछ ।
आयोजना सम्पन्नका लागि करिब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको स्वामित्व पूर्णरुपमा नेपालीमा रहनेछ ।
प्रकाशित समय १६:१९ बजे
पछिल्लाे - बालबालिकालाई आकर्षण गर्ने शिक्षा आवश्यक : मन्त्री थापा
अघिल्लाे - मकवानपुरका कृषकलाई युरिया मल अभाव